အကယ်၍ ၀ န်ထမ်းကသူမရှိခြင်းကိုလုံလောက်စွာအသိပေးခြင်းမရှိပါကအလုပ်ရှင်သည်စုပေါင်းသဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပရီမီယံကိုလျှော့ချနိုင်ပါသလား။
Posted by ကို Tranquillus | ဒီဇင်ဘာလ 8, 2020 | web ပေါ်မှာ
Lorsque la convention collective prévoit certaines primes, elle peut laisser le soin à l’employeur d’en définir précisément les modalités d’attribution. Dans ce contexte, l’employeur peut-il décider que l’un des critères d’attribution de la prime corresponde à un délai de prévenance minimal du salarié en cas d’absence ?
စုပေါင်းသဘောတူညီချက်များ - အခြေအနေတစ်ခုအရပေးဆောင်ရမည့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆုကြေးငွေ
Un salarié, travaillant au sein d’une entreprise de sécurité en tant qu’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire, avait saisi les prud’hommes.
Parmi ses demandes, le salarié sollicitait un rappel de salaire au titre d’une သုဒ္ဓ de performance individuelle (PPI), prévue par la convention collective applicable. Il s’agissait de la ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများအတွက်စုပေါင်းသဘောတူညီချက်, qui indique (art. 3-06 de l’annexe VIII) :
« Il est versé une prime individuelle de performance représentant en moyenne 1 demi-mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante et présent 1 année complète. Son attribution est effectuée selon les critères obligatoirement définis par chaque entreprise avant le début de chaque année. Ces critères peuvent notamment être : assiduité, ponctualité, résultats aux tests internes à l’entreprise, résultats aux tests des services officiels, relationnel client-passagers, attitude au poste et présentation de la tenue (…)
အကယ်၍ ၀ န်ထမ်းကသူမရှိခြင်းကိုလုံလောက်စွာအသိပေးခြင်းမရှိပါကအလုပ်ရှင်သည်စုပေါင်းသဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ပရီမီယံကိုလျှော့ချနိုင်ပါသလား။ ဇူလိုင်လ 10th, 2021Tranquillus
ဖတ်ရန် ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူမှုရေးနယ်ပယ်များတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - ပြင်သစ် Relance အတွက် ဦး စားပေးမှု
လွန်ခဲ့သောအလုပ်ခွင်ဆရာဝန်၏ထောက်ခံချက်ဖြင့်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ခြင်း - သင်လိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသလား။
CPF တွင် DIF သို့အခွင့်အရေးများလွှဲပြောင်းခြင်းကို ၂၀၂၁၊ ဇွန် ၃၀ အထိတိုးချဲ့ခဲ့သည်
8| အလယ်အလတ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လည်ပတ်မှုကို မည်သူ တက်ရောက်နိုင်သနည်း။